musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Cinnamon Lodge Habarana inosvika pakakwirira
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kutarisirwa • Sri Lanka Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Cinnamon Lodge Habarana inzvimbo yechishanu-nyeredzi yakamisikidzwa murunyararo rwechisikigo mukati memoyo weSri Lanka's Cultural Triangle
Green Globe yakadzokororwa Cinnamon Lodge Habarana muna Ndira gore rino nenzvimbo yekutandarira ichiwana huwandu hwepamusoro hwekuteerera hune 86%.
VaArosha Pananwala, General Manager panzvimbo yekutandarira vakati, “Isu, kuCinnamon Lodge Habarana, tinofara zvikuru kuzivisa kuti takapihwa zvakare Green Globe Certification yegore rino. Isu tinokudzwa kubata ichi chakakurumbira, chinotenderwa pasi rose chitupa chekuvandudza mashandiro, chakagadzirirwa chaizvo indasitiri yekufamba neyekushanya. Kubudirira uku kunosimbisa mukurumbira wedu usingapikiswi mukupa masevhisi epamusoro kune vatengi vedu uye nekuvandudza mashandiro edu zvinoenderana nematanho epasi rose. "Ndinoda kukorokotedza vashandi vedu nechikwata cheCinnamon Lodge Habarana nekuwana rumbidzo iyi nekuvakurudzira kuti vaenderere mberi nekuita kwavo kwakanaka izvo zvinokwidziridza zita redu kusvika pakakwirira."
Vese manejimendi nevashandi vepahotera vakaita kuyedza kukuru munzvimbo dzakakosha dzekusimudzira pamwe nekubudirira kwakanyanya.
Manejimendi manejimendi yaive yeimwe yeakanakisa zviitwa pamwedzi gumi nembiri yapfuura. Pakupera kwa12 / 2017 - Cinnamon Lodge yakawana 18% gore pagore kudzikisira mvura yakatorwa kubva kune zvakasikwa masosi. Kuongororwa kwemvura kwakaitwa zvakare muna 21/2017 kuti vaone nzvimbo dzinogona kuchengetwa mvura uye kurudziro irikuitwa. Zvirongwa zviri munzvimbo yekuisa inoyerera inodzora mumakamuri ese evashanyi kuitira kuti ive nechokwadi chekuyerera zvine mwero zvichibva pamatanho akasetwa.
Mvura yemvura yakadzokororwazve yakaona kuvandudzika kwakanyanya. Sevhareji yemwedzi, 52% yemvura yese inoshandiswa inoshandiswa zvakare kuburikidza neiyo onsite sewerage kurapwa chirimwa (STP). Zvakare, kurasa marara kwakaderedzwa ne7% uye chivakwa chekabhoni chakatsikiswa ne6% pamusiku wevaeni muna 2017/18.
Iyo nzvimbo yekutandarira yakashandisa nzira dzinoverengeka dzinosanganisira kuwedzera mwenje unobata magetsi, izvo zvakave nechokwadi chekudzikiswa kwesimba rekushandisa. Muna 2017/18, mazana matatu eCFL mababu akachinjirwa pamusoro kuenda kuLED munzvimbo dzevaenzi uye makumi maviri akajairwa AC mayunitsi akatsiviwa ne inverter AC zvikamu. Simba rinowedzerwazve rinoshandiswa nemaseru ezuva anoshandiswa kupisa kwemvura.
Sri Lankan organic culinary ruzivo kuCinnamon Lodge, Habarana
Cinnamon Lodge ikozvino iri kupa vashanyi vayo ruzivo rwekugadzirira ruzivo rwuri rwega uye zvechokwadi Sri Lankan. Zvichienderana neyakavakirwa imba yekutandarira uye yechinyakare matumba edzimba, iyo nyowani yekudyira chiitiko chakanyatso kurongedzwa kune vekunze nekune dzimwe nyika vashanyi uye zvichavatendera kuti vacherechedze hwakawanda hwakawanda hwetsika nzira dzekubika uye nzira dzekugadzirira, samputa inonaka rondedzero yeSri Lankan ndiro uye zvinwiwa uye dzidza zvakawanda nezve maitiro ekurima emuno. Iyo nzvimbo yekutandarira inoshandisa rakakura organic purazi panzvimbo yayo, iyo inoburitsa yakawanda michero nemiriwo, pamwe nemupunga, mukaka, uye huchi.
Chikwata cheGreen pane iyo chivakwa chakagadzira yakabudirira composting system. Kompositi ine tsvina yemubindu inounganidzwa kubva kuCinnamon Lodge Habarana minda pamwe nemupfudze wepurazi uye unoshandiswa kuisa fetereza yemahara miriwo nemiriwo. Iyo nzvimbo yekutandarira yakatanga kupa manyowa netoni uye nematarakita anorema kune vamwe vatengi, nokudaro ichideredza kushandiswa kwefetiraiza yemakemikari mumapindu nemapurazi. Packs e compost anotengeswawo kune vashanyi nevashanyi.
Green Globe ndiyo sisitimu yekusimudzira yepasirese inoenderana nemaitiro anotambirwa epasi rese ekuchengetedza mashandiro uye manejimendi emabhizimusi ekushanya nekushanya Kushanda pasi pe rezinesi repasirese, Green Globe iri muCalifornia, USA uye inomiririrwa munyika dzinopfuura makumi masere nematatu. Green Globe inhengo Inobatana yeUnited Nations World Tourism Organisation (UNWTO). Kuti uwane ruzivo, ndapota shanya www.vaperempire.com.